TOMATO "BUUX BUUXA 241": SHARAXAADDA IYO ASTAAMAHA NOOCYADA KALA DUWAN, SAWIRADA IYO ASTAAMAHA BEERITAANKA YAANYO - BEER CAGAARAN
Waxyaabaha kala duwan ee yaanyo "Filling White" (magaca kale - "buuxinta White 241") ayaa muddo dheer ka dhistay oo keliya dhinaca wanaagsan. Qaybahani waxay caan ku yihiin jiilasha dhowr ah oo ka mid ah beeraleyda.
Sababta caansanaantu waxay tahay in yaanyadaasi ay leeyihiin tiro astaamo ah oo soo jiidasho leh - aan qabyo ahayn, qadarin, dhalid wanaagsan. Akhri wax dheeraad ah maqaalkayaga. Halkan waxaan kuugu soo bandhigaynaa sharaxaada kala duwan, astaamaha iyo astaamaha beerashada.
Tamaandhiga "buuxinta cad" ("buux buuxa 241"): sharaxaadda noocyada kala duwan
Waxyaabaha kala duwan waxaa laga soo saarey tarbiilayaal ka socda Kazakhstan (saldhigga quudinta qudaarta ee la yiraahdo V. I. Edelshtein), iyada oo la soo gaabiyo Beelaha kala duwan. Waxay ka diiwaan gashan tahay Diiwaanka Gobolka ee ku yaalla Ruushka ee beerista dhul beereed 1966-kii. Geedku waa mid go'aaminaya (ma kori doono qodobo gaar ah); ma laha nooc nooc oo kali ah.
Stem resistant, xoog leh, in lagu koriyo koraan karaa ilaa 70 cm, dhulka u furan - ilaa 50. Waa mid caadi ah ee dhexdhexaad ah oo fudud ee burushyada ku saabsan 6 gogo '. Xakameyntu waa mid awood leh, way korodhaa (ilaa 50 cm) jihooyin kala duwan oo aan qoto dheerayn. Caleemaha waa mid dhexdhexaad ah, cagaaran cagaaran, nooca caleen wuxuu caan ku yahay "yaanyo", oo dharbaaxo leh qaab dhismeedka aan lahayn timo.
Warshad Inflorescence waxay leedahay nooc sahlan oo dhexdhexaad ah. Duufaankii ugu horreeyay waxaa la sameeyaa caleen 6aad, tan xigta - iyadoo la raacayo 1-2 caleemo. Ubaxa wuxuu ka kooban yahay 3 xabbo. Ku dheji xayiraad. Miraha si fiican u ilaali, ha dhicin. Marka loo eego heerka daaqsinka, noocyada kala duwan ee "Filling White" yaanyo waa hore (hore), dadka qaarkood waxay ugu yeeraan ultra-hore. Goynta waa suurtogal in 80 - 100 maalmood ka dib dhalashada ee geedo (dhulka dambe).
Waxay leedahay mid ka fiican (celcelis ka sarreeya) caabbinta cudurrada caadiga ah.. Xummad ka dib, taas oo mabda'a ah waxaa jira qiyaaso, sababtoo ah koriinkarashada hore ma laha waqti ay ku xanuunsadaan. Waxaa jira difaaca jirka macrosporosis (qallalan qallalan). Waxaa loogu talagalay beerista dhul furan, sidoo kale beeritaanka aqalka dhirta lagu koriyo waa suurogal.
Dhibaatooyinka la ogaaday soo ifbaxay noocyo cusub oo kobcaya:
celinta celceliska cudurka.
Faa'iidooyinka looma lumo waqtiga:
aan qabin xaaladaha cimilada;
ma dalbanayo daryeel joogto ah.
Tilmaamaha waxaa ka mid ah iska caabin si ay u burburiso geedka. Dalaggu wuxuu keenay xitaa xagaaga qabow. Si fiican u dulqaad kuleylka. Marka hore, marka noocyo faro badan oo miro ah oo aan la nadiifin, "White poured" yaanyada, sida sharaxaad ka bixiya, ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin noocyo miro badan.
Laga soo bilaabo geedka aan dhibaato lahayn waxay ka soo qaataan 3 kg, laga bilaabo 8 kg 1 mitir oo laba jibbaaran. m. Miraha waxay u bislaadaan ku dhowaad siman. Foomka - ku wareegsan, oo la isku dhajiyey kor iyo hoosba, hooseeyo. Cabbirka - qiyaastii 7-8 cm dhexroor, miisaanka - laga bilaabo 100 g maqaarku waa siman yahay, matte, khafiif ah. Midabka miraha cagaarka ah waa cagaar cirro leh, si tartiib tartiib ah ayuu u bilaabmaa inuu iftiimiyo xitaa more, midabku wuxuu u soo baxaa sida tufaaxa "buuxinta cad", midhaha bislaaday waxay leeyihiin midab casaan.
Jirka waa fareem, casiir leh, waxyaabaha maaddada qallalan waa 5% ka badan. Seedsadka celceliska waxaa laga heli karaa tiro kala duwan oo ka mid ah qolalka, laga bilaabo 4 ilaa 12. Goosashada "buuxinta Caddaan" waxaa la hayaa waqti dheer, gaadiidka sidoo kale waa ku qanacsan yahay. Yaanyada waxay leeyihiin dhadhan raaxo leh iyo caraf udgoon, oo asal ahaan loogu talagalay beerista for processing, si kastaba ha ahaatee, waxay la cunaa cusub oo raaxo leh. Tag salads cayriin, jarista, saxamada kulul.
Tamaandhada ayaa leh waxyaabo badan oo faa'iido leh oo aan la lumin marka lagu jiro daaweynta kulaylka. Tamaandho waa ay ku yar tahay kalooriyeyaasha, laakiin gaajadu si fiican ayey ugu qanacsan tahay. Wixii soo saarka suugada, ketchup, yaanyo, juuska ayaa sameyn doona, laakiin casiirku wuxuu noqon doonaa mid qaro weyn. Si fiican u adkaysii. Ilaalinta miraha oo dhan waa mid guulaysan - miraha ma jabin.
Tamaandho "buuxinta cad" ayaa si fiican loogu arki karaa sawirka hoose:
Koraaya dhulka Ukraine, Ruushka iyo wadamada kale ee dhow. Goobaha ugu wanaagsan waa Kazakhstan iyo hareeraheeda. Sidaa darteed, waxaad ka baratay sharaxaadda kala duwan, sawirku wuxuu si cad u muujinayaa sida yaanyada iyo tamaandhada dhexdhexaad ah ee yaanyada ah ee Toomada buuxsamaysa - siduu sidan u korayaa? Seeds waxaa lagu nadiifiyaa xal daciif ah ee kiniinka potassium ilaa 2 saacadood, lagu dhaqay biyo socda, laguula dhaqmo kiciya kobcinta kobcinta (optional). Dhamaadka bisha Maarso - Abriil, waxaa lagu beeray ciidda bakeeriga ah ee kuleylka ah oo loo kaydiyo kayd ballaaran.
Carrabku waa inuu hooseeyaa aaladaha oo si fiican u buuxsamo oksijiinka. Waa in la nadiifiyaa oo la ciriiriyaa. Beeraha lagu beeray qoto dheer oo ku saabsan qiyaas ahaan 2 cm, oo leh masaafada ugu yaraan 2 cm u dhexeeya iyaga oo daadi biyo diirran oo dabool leh muraayad sharoobada ama dhalada khafiif ah si aad u sameysid qoyaanka la rabay. Sidaas abuur ah Gagaab oo si deg deg ah. Heerkulka jeermiska waa in uu ahaado ugu yaraan 23 digrii.
Kadib soo bixitaanka caleemaha waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro dusha. Biyaha sida loo baahan yahay, iyada oo aan biyo ku jirin caleemaha. Marka seedling uu leeyahay 2 buug oo si fiican u horumarsan, waa in la sifeeyo. A pick (dhirta beerto ee koobabka kala duwan) waxaa looga baahan yahay si loo xoojiyo nidaamka xididka iyo dhirta guud ahaan. Si aad u fadhiisatid waxa fiican in la isticmaalo koobabka peat ama warqad. Qalabkani si dhakhso ah ayuu u jajabiyaa iyada oo aanu jirin cawaaqib xumada
Marka transplanting si meel joogto ah, waxaad dhigi kartaa geedo ceelasha saxda ah ee koobabka. Tani waxay ka fogaaneysaa cadaadiska iyo dhaawaca dhirta. Marka korinta geedo, waxaa lagama maarmaan ah in ay ku quudiyaan dhowr jeer leh Bacriminta macdanta. Ka hor inta beerto, waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo yaanyada, qiyaastii 2 toddobaad ka hor transplanting, waxaa lagama maarmaan ah in la furo hawo (waxaad dhali kartaa dhirta dibadda) dhowr saacadood.
Wixii 50 - 60 maalmood, waxaa suurtagal ah in ay ku beeri geedo ee lagu koriyo ah, toddobaadkii - in dhul furan, marka maqnaanshaha ee dhaxan. Dhirta waa in ay ka sareeyaan 20 cm oo ay leeyihiin 5-6 calaamadood. Daadinta waxaa lagu sameeyaa ceelasha si qoto dheer leh (marmarka qaarkood nidaam laba-kaban), masaafada u dhaxaysa dhirta waa inay ahaataa qiyaastii 50 cm Caanaha ku jira fosfooraska waa in lagu daraa ceelasha ka hor inta aan la beeri. Carrabku waa in sidoo kale la nadiifiyaa oo la bacrimiyo. Waraabinta waxaa lagu fuliyaa xidid aad u badan, ma aha inta badan. Sida loo baahdo. Bacriminta waxaa la maamulaa toddobaadkii hal mar iyo badh. Dareemidda iyo xirashada yaanyo "buuxinta cadaan 241" uma baahna.
Cudurada intooda badan waxaa la joojiyaa jeermi dilaaca iyo abuurka.. Laga soo bilaabo cudurrada cayayaanka iyo cayayaanka, waxaa jira diyaargarow maadeysi ah ee dukaamada khaaska ah. Diyaargarowgaan waxaa lagu sameeyaa daaweyn ka hortag ah dhowr jeer inta lagu jiro xilliga xagaaga.
Tamaandhada "buuxinta Caanaha" ayaa muddo dheer la sameeyay oo la xaqiijiyay oo kala duwan oo ka mid ah miraha dhadhan fiican ee cabbirka dhexdhexaad ah, beerashadoodu ma bixin doonto kharash iyo naafonimo ee aaggaaga.